Qolka-muuska-FOSHAN GOODTONE FURNITURE CO., LTD
Guji si aad u gasho qolka bandhiga ee Xaqiiqda Virtual GoodTone
Hoolka bandhiga waxa uu bixiyaa adeegyo khibrada wax soo saarka, alaabooyin kala duwan, iyo awoodo taageero mashruuc oo xoogan.
Ka qayb-galay Shiinaha (Guangzhou/Shanghai) Carwadda Agabka Caalamiga ah, Cologne Fair ee Germany, Dubai International Furniture Fair, Malaysia Furniture Fair, iwm muddo 10 sano ah oo xiriir ah.Mar kasta oo aan ka qayb galno bandhigga, waxaan noqon karnaa diiradda macaamiisha gudaha iyo dibadda.
Soo saarid hufan, adeeg daacad ah. Qalabka wanaagsan ee alaabta guriga ayaa u hoggaansamay mabda'a "wax-soo-saar hufan iyo adeeg daacad ah" si loo bixiyo jawiga xafiiska ugu raaxada badan bulshada.Si loo hubiyo in wax soo saarka warshadu ay yihiin kuwo si caqli-gal ah loo soo saaray.
Si aad u noqoto calaamad caalami ah oo ka mid ah alaabta guriga asalka ah ee Shiinaha ee asalka ah.Goodtone Iyadoo horumarinta "hal-abuurnimo" sida xoog wadista aan la koobi karin ee horumarinta ganacsiga, waxay leedahay koox R & D oo dhalinyaro ah oo tababaran oo awood leh waxayna horumarisay noocyo badan oo alaab ah sannad kasta.Waxay soo saartay badeecooyin taxane ah oo caan ah oo si weyn loo ammaanay suuqa, kuwaas oo ay doorbideen macaamiishu.Hal-abuurka, waxaan had iyo jeer ilaalin doonaa ruuxa aan joogsiga lahayn, geesinimada iyo xaqiiqada dhabta ah, si aan u siino macaamiisha alaab cusub oo tayo sare leh.
Inaad noqoto shirkad qarni jirsatay oo aad ka mid noqoto shirkadaha alaabta guryaha ee ugu wanaagsan adduunka.